Inkantolo Yokwedlulisela Amacala ibheka nxa zonke - Bayede News
Home » Inkantolo Yokwedlulisela Amacala ibheka nxa zonke
Inkantolo Yokwedlulisela Amacala isanda kukhipha isinqumo ngecala ebeliphakathi kukaNgqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal noMnu uJabulani Crosby Maphanga elingunombolo 653/2018. Ababehlalele leli cala nguMehluleli uMaya, uWallis, uDambuza noWeiner.
Laqala ukulalelwa zingama-27 kuNcwaba isinqumo saze sakhishwa zili-18 kuLwezi wezi-2019. Lesi sicelo kwakungesokuphikisa isinqumo seNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu esakhishwa uMehluleli uGorven. Ababefake isicelo kwakungamaLungu Esigungu Esiphezulu oMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu noNgqongqoshe wawo bechitha uMnu uJabulani Crosby Maphanga. UMnu uMaphanga naye wafaka isicelo sokuphonsa ngemibuzo abamangali ngaphambi kokudlulisela phambili kokuqala icala.
Leli cala linomlando omude wokungaphatheki kahle kukaMaphanga, osuka ngaphambi kokuba izwe lithole inkululeko. Ukudlulisela icala isinyathelo sakamuva semizamo yakhe yokuxazulula ukungaboni ngasolinye phakathi kwakhe nowayengumqashi wakhe okungumnyango kangongqoshe ongummangali wokuqala ngowe-1998. Ngaphambi kowe-1994 uMaphanga wayeqashwe iNatal Provincial Administration. Emuva kokuhlanganiswa kweminyango kuzwelonke kufakwa yonke eyayingaphansi kukahulumeni wezabelo, uMaphanga wangena eMnyangweni Wohulumeni Basekhaya Nezezindlu. Ngokusho kwakhe izinkinga ziqale ngesikhathi enganyuselwa esikhundleni okwabe kuyilungelo lakhe waphathwa kambi naseMnyangweni. Udaba waqala ngokulifaka eNkantolo Yezabasebenzi efuna ukunuselwa esikhundleni noma aqashwe kwesinye isikhundla eMnyangweni.
INkantolo Yezabasebenzi yamchitha ngoLwezi we-1998 ngokuthi ayinawo amandla njengoba lokhu kwenzeka usuwashaywa kudala uMthetho iLabour Relations Act 66 of 1995. Udaba lwadlulela eNkantolo Yezimboni nalapho wangaphumelela ngoNcwaba we- 1999. Isinqumo esaphuma ngesokuthi udaba kwakumele lulalelwe enkantolo edingida ezomphakathi, uMaphanga wagcina elufake nakwezinye izinhlaka njengoMvikeli Womphakathi, iSouth African Human Rights Commission nasephephandabeni iCity Press. Waphinda wafaka isikhalo sakhe ngokusibhala phansi kwilungu lePhalamende neKomidi Lomnyango Wezobulungiswa. Yonke le mizamo eyaze yafinyelela emaphethelweni ngowezi-2004 ayizange iphumelele. NgoNhlangulana wezi-2000 waphuma emsebenzini wathatha ipackage
Kwathi ngonyaka wezi-2013 wafaka icala lokungaphathwa ngendlela eMkhandlwini iGeneral Public Service Sectoral Bargaining Council okanye iBargaining Council, ngokuhluleka koMnyango ukumnyusela esikhundleni. Imizamo yakhe yokuthi lesi sinqumo sibuyekezwe yiNkantolo Yezabasebenzi ngokunganyuselwa esikhundleni sachithwa ngoLwezi wezi-2014, kwenzeka okufanayo nasesicelweni sakhe sokwedlulisela icala eNkantolo Yezabasebenzi. NgoNhlangulana wezi-2016 uMaphanga wafaka isaziso ngezinhloso zakhe zokuthathela izinyathelo zomthetho uNgqongqoshe ngokulandela i-Institution of Legal Proceedings ehambisana nomthetho iCertain Organs of State Act 40 of 2002. Wafaka icala eNkantolo eNkulu eThekwini. Kuleli cala wayefuna ukukhokhelwa amadameshe ngakubiza ngephutha nokungalandeli umthetho ngesinyathelo soMnyango sokudayisa umuzi wakhe ukuze kukhokhelwe izindleko zentela ezingama-R41 174, 83 ngenxa yokukhala ngaphansi eNkantolo Yezabasebenzi.
Ukwahlukana kwezinkantolo kuleli kumi kanje
Emuva kokuthola isaziso sikaMaphanga, uNgqongqoshe waya enkantolo ethi: uMaphanga akakwazi ukubafaka icala kunoma iyiphi inkantolo enkulu okanye encane ngesicelo abasifaka noMnyango wakhe noma umsebenzi. UNgqongqoshe wayethi akakwazi ukuphikisaa nesinqumo sabo futhi inkantolo kumele imnike leli lungelo uma isibonile ukuthi akasebenzini yini budedengu izinhlaka zikahulumeni njengezinkantolo.
UNgqongqoshe waphinde wafaka isicelo esiphuthumayo efuna zonke izikhalo zakho zisuswe. UMaphanga owayezimele kuzona zonke izigcawu lapho ayedlulisela phambili khona amacala, kukhona icala angavelanga kulo ngenxa yokugula. Waveza ukuthi icala angeke liqhubeke ngenxa yokuthi uyagula. Inkantolo yamchitha kuwona wonke amacala uMaphanga wakhokhiswa nezindleko zecala, nalo lakhishwa ohlwini lwamacala.
nguNgqeshe Buthelezi Nov 21, 2019